Sale & Marketing Manager | Hi Welcome Travel & Tours ﻿
16.9.2019, Full time , Tourism / Travel
•	Marketing Plan များကို ရေးဆွဲနိုင်သူဖြစ်ပြီး Team ကို ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	လူအများနှင့် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီး အလုပ်အပေါ် ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	Marketing နှင့်ပတ်သက်၍ Tours ပိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၅ နှစ် ရှိသူဖြစ်ပြီး Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ပြီး Marketing နှင့် ပတ်သက်သော Diploma (သို့) Certificate တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	Mareketing နှင့် သက်ဆိုင်သော platform များအားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ပြီး English စာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
Work location No. 333, 4th Floor, Tapin Shwe Htee St, 1 Quarter , Bayint Naung, Mayangone Tsp.
55 Days, Full time , Tourism / Travel
● Accountancy နှင့်ပတ်သတ်၍ အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ရှိရမည် ● Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည် ● Accountancy နှင့်ပတ်သတ်သှောSoftware များကို အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်
Cashier (Money Changer)
60 Days, Full time , Tourism / Travel
•	လူအများနှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီးCustomer Service ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
161 Days, Full time , Tourism / Travel
167 Days, Full time , Tourism / Travel
348 Days, Full time , Tourism / Travel
Sale & Marketing Manager Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Hi Welcome Travel & Tours Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Tourism/ Travel Jobs in Myanmar, jobs in Yangon